“Kooxda waxay noqotay awood la’aan kaddib bixitaankii Ramos iyo Varane” Xiddig hore Real Madrid ah – Gool FM
(Madrid) 30 Luulyo 2021. Xiddigii hore kooxda Real Madrid ee Predrag Mijatović ayaa sheegay in Real Madrid noqotay mid aan awood laheyn kaddib bixitaankii Sergio Ramos iyo Raphael Varane xagaagan.
Kabtan Sergio Ramos ayaa ka tagay Real Madrid xagaagan ka dib markii uu dhacay qandaraaskiisii kooxda Los Blancos, isaga oo ugu biiray naadiga Paris Saint-Germain beeca xurta ah.
Toddobaadyo kaddib waxaa isna Real Madrid ka tagay isla markaana ugu biiray kooxda Manchester daafaca reer France ee Raphaël Varane qiimo lacageed dhan 50 million euros, taasoo ka dhigtay in Los Blancos ay lumisay labada daafac ay ku tiirsaneyd sannadihii la soo dhaafay.
Haddaba wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu bixiyay halyeeyga kooxda Real Madrid ee Predrag Mijatović, wuxuuna yiri:
“Bixitaankii Sergio Ramos iyo Raphaël Varane? Taasi dhibaato ayay noqon kartaa.”
“Ciyaartoy badan ayaa amaah ku soo laabtay, laakiin Varane iyo Ramos ayaa ka tagay xagaagan.”
“Real Madrid waxay noqotay wax yar oo awood la’aan ah, kaddib markii ay labadaasi nin ka tageen, laakiin arrinta ma xumaan karto haddii aad sameyso heshiis fiican oo dhanka daafaca ah xilli ciyaareedka soo socda, sababtoo ah maahan kaliya inaad ka fikirto xoojinta safka weerarka.”